ှုငဆန်နီရေဒီယို(၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing »ှုငဆန်နီရေဒီယို(၆)
Posted by Sonny on Sep 6, 2012 in Creative Writing, Critic | 14 comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ငဆန်နီ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ၏။
ပညာရေးအကြောင်းပါ။ ဒီအကြောင်းကို ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်တို့လည်း ပြည့်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်မှာ
“ပညာဟူသည်မြတ်ရွှေအိုး” ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ကို “ဒီလိုပညာရေး” လို့ဆိုပြီး အမည်မှည့်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။
“ဒီလိုသင်မယ် ဒီလိုကျက်၊ ဒီလိုမေးမယ် ဒီလိုဖြေ၊ဒီလိုအောင်” တဲ့။
“ဘာကြောင့်နုံချာနေတဲ့ အကြောင်းကို ဆန်းစစ်မယ်ဆိုလျှင် တွေ့ရတာက စာသင်ရာမှာ နှုတ်တိုက်အာဂုံဆောင် ခြင်းကို တရားလွန်အားပေးနေတာက ပညာရေးစနစ်ရဲ့ အမည်းမှတ်ကြီးဖြစ်တယ်” လို့ဆရာမကြီးက ထောက်ပြထားပါတယ်။
Route Learning စံနစ်ပါ။
အမေစု (သို့) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း ပညာရေးကိုဝေဖန်ထောက်ပြဘူးပါတယ်။အလွန်နိမ့်ကျနေပါသေး တယ်တဲ့။ လူငယ်တွေကိုိလည်းစာများများဖတ်ဖို့ ဒီတစ်ပတ်ထုတ် ဒီလှိုင်းဂျာနာယ်မှာ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ လူငယ်တွေကိုလည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဘ၀ အပြည့်ခံစားစေချင်တယ်တဲ့။ (CAMPUS LIFE)
ရတဲ့ဘွဲ့ ကို ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ဘွဲ့
အမေစု စာဘယ်လောက်ဖတ်သလည်းဆိုတာ သူနဲ့ Alan Clements တို့ရဲ့အင်တာဗျူး စာအုပ် “Voice of Hope” ဆိုတဲ့စာအုပ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် အမေစု ရဲ့ စာဖတ်အား ကြောက်ခမန်းလိလိကြုံကြရမှာပါ။
ကျောင်းလခဈေးကြီးတဲ့ အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းက ကလေး တွေ ရဲ့ အိမ်စာတွေကို ကူညီရှင်းပြပေးပါတယ်။ အဲ ထူးခြားတာတစ်ခုက မန္တလေး ဧရာဝတီ ကျောင်းက Grade6မှာ PSHE (PERSONAL, SOCAIL, HEALTH EDUCATION) လူမှု့ရေး ဘာသာလို့ပြောရမယ်နော်..အဲဒီ စာအုပ်က အမေရိကားက ပြဌာန်းချက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာလူမှု့ရေးဘာသာ ပါပါတယ်။ နှံ့နှံ့စပ်စပ်ရေးမထားပါဘူး။ တွေးစရာမပါပါဘူး။
“ဆရာတစ်ယောက်ဟာ သူ့တပည့်တွေကို အ်ိမ်ပြန်ရင် အိမ်စာလည်းပေး တွေးစရာလည်းပေး လိုက်ရမယ်” တဲ့။
အဲဒီ စာအုပ်(PSHE) မန္တလေး ဧရာဝတီ ကျောင်းက Grade6မှာ နောက်ဆုံး ASIA အခန်းမှာ ထူးခြားတာကတော့ အမေစု (ခ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းတခမ်းတနားဖေါ်ပြထားပါတယ်။ စံပြုထိုက်သူ၊ အာရှသူ၊ ဒီမိုကရေစီ အရေး လူထုအရေး ဆောက်ရွက်သူ၊ူ နိုဘယ်ဆုရှင် အဖြစ် သင်ခဏ်းစာထဲ ထည့်ထားခြင်းပါ။ အမေစု အကြောင်း ပါရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သင်ရိုးဆွဲပုံ ကအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သင်ရိုးမှာ သိသင့်သိထိုက်တာတွေပါနေပါတယ်။ ဥပမာ ဘာသာရေးဆိုရင် ခရစ်ယာန်အကြောင်းရော ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းရော ဟိန္ဒူဘာသာရော အစ်လာမ် အကြောင်းရောပါပါတယ်။ ကျွန်တော် ဥာဏ်မှီသလောက်ကတော့ အနာဂတ် ကို ပုံဖေါ်ပေးနိုင်ပြီး လက်တွေ့ဘ၀ ကို ရင်ဆိုင်နိုင်မည့် သင်ရိုး ( SYLLABUS ) ကို နိုင်ငံခြားအကူညီယူပြီးဖြစ်ဖြစ် ဒါမမဟုတ် ပြည်တွင်းက နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံရှို ဆရာဆရာမများ ပူးပေါင်းပြီး ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ အချိန်နောက်ကျနေပါပြီ မြန်မြန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း ကြေငြာမောင်းခတ်လိုက်ပါရစေ။
အမေရိကားတော့ရောက်ဖို့နေနေသာသာ အိမ်မက်တောင်မမက်ဘူးပါဘူး ကြားဘူးနားဝရှိတာကတော့နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း သင်ရိုးတွေကို UPGRADE လုပ်တယ်လို့ ကြားဘူးတာပဲ။ဒါကြောင့်သာ အမေစု အကြောင်း PSHE မှာပါတာပေါ့။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေး ရော စီးပွားရေးရော လူမှု့ရေးရော အခြေခံအဆောက်အအုံရော အပေါ်ထပ်အဆာက်အအုံရောသာ
ခင်ဗျားကြိုက်သလိုသာစီမံပါ..သမ္မတတော့ ဖွဲ့စီးပုံအခြေခံဥပဒေ က(တမင်တကာ)တားထားတော့ လုပ်မရဘူး..
ဒါပေမဲ့လုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဗျာလို့ ဘဘသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က သာ pass ပေးလိုက်ရင်………………(အတွေးမျှသာ)
အောက်မှာPSHE စာအုပ်က ဓါတ်ပုံလေးတွေဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
အမေစု အကြောင်း ကလေးများကို နမူနာပေးထားသောစာပိုဒ်
ပြင်+ညာ+ရေး ခဲ့ကြတာ ရာစုဝက်ကျိုးခဲ့ပါပြီဗျာ…။
ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ လို့ စီမံသူတွေကိုလဲ ပြောင်းသင့်ပါပြီ..။
ကျုပ်ကိုတော့ ဆဲချင်လဲဆဲကြတော့ အရပ်ကတို့…..
ပညာရေးကို စီမံတာ ပညာတတ်တွေရဲ့အလုပ် ဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့..။
ပညာတတ်စစ်စစ်တွေကို သူ့နေရာသူပို့ပါတော့………. လို့….။
မဆဲပါဘူး မှန်တာ အကျိုးရှိတာပြောတာပဲ ပြောသာပြော
ကိုဆန်နီရေ သူကြီးစကားကို ခဏငှားသုံးရရင် ကျမတို့ ပညာရေးက ဦးနှောက်မပါတော့တဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား လက်ထက်တခုမှာ ကျိန်စာမိသွားတာပါ ။
ခုလို လမ်းဆုံရောက်လာတဲ့ ကာလတခုမှာ ဆိုင်ရာများ ဦးနှောက်ကြီး နားကြီး မျက်စိကြီး အမြော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ ကျိန်စာဖြေစေနိုင်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်ရပါတော့တယ်။
ဆရာမကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ကတော့…မဆလ ခေတ်ကတည်းက န၀တ ထိ ကြိမ်စာသင့်ခဲ့တာတဲ့..
ဒီလိုသင်မယ် ၊ ဒီလိုကျက် ၊ ဒီလိုမေးမယ်
ဒီလိုဖြေ ၊ ဒီလိုအောင်
ဒီလိုမလုပ်ဖို့ ၊ ဒီလောက်ပြောလဲ
ဒီလိုနားမလည် ၊ ဒီလိုပဲလုပ်နေကြတော့
ပျို၂မေရေ..သိပ်ခက်တယ်တဲ့..သူက ဆိုတဲ့ဗဒင် သီချင်းလိုပဲ
ကျွန်တော် အင်စတီကျုယူနီဗာစတီကို ရောက်ခဲ့တယ်
ကျွန်တော် ၁၀တန်းအောင်တဲ့အထိ သင်ခဲ့တာက ဆရာ/မ , ဂိုက်များက ဘာသာတိုင်းကို တစ်လုံးချင်း တစ်ကြောင်းချင်းစီရှင်းပြပေးပြီးမှ အလွတ်ကျက်ခဲ့တာကိုး
ယူနီမှာကြ ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်ပြသွားတဲ့ ဆရာ/မ များတယ်
ကိုယ့်ဘာသာကို ဒစ်ရှင်နရီ ကိုင်ပြီး ရွှိုင်းရမယ်ပေါ့
ဒါနဲ့ အပျင်းထူတဲ့ ကျွန်တော် ငမောင်ပေ လဲ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနဲလာပြီး အဆုံးမှာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထွက်လာခဲ့တာပဲ
နိုင်ငံအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော စာရေးဆရာဒေါက်တာ ဖြစ်နိုင်သားနဲ့…
အလွှတ်ကျက်ခဲ့ရမှာ( တစ်ခါတရံ အလွတ်ကျက် ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် )
ပညာရေးဖြင့် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်အံ့ ဆိုပီး ကျောင်းတွေမှာ ရေးထားတယ်ခင်ဗျ….
ပညာရေးကိုတော့ အမှန်အကန် ပြောင်းလဲသင့်နေပါပြီဗျာ….
အလွတ်ကျက်စနစ်နဲ့ အောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ရောက်လာသူတွေကို ကျက်ကသိုလ်လို့
ဟုတ်တယ် ကျက်က္ကသိုလ် အစစ်ပါ အက်ဆေးတောင် ကျက်ဖြေတာပဲ
“လူငယ်တွေက ငယ်တုန်းများများကိုယ့်ကိုကိုခိုင်းရမယ်တဲ့ ကြီးရင် သူများးခိုင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့”
ပညာရေးကို သူတို့ကိုယ်တိုင် မြှင့်တင်လိုစိတ်ရှိုရမှာပါ။